1 AmaKhosi 4:1-34
4 INkosi uSolomoni yaqhubeka iyinkosi phezu kuka-Israyeli wonke.+ 2 Yilaba ababeyizikhulu+ zayo: U-Azariya indodana kaZadoki,+ umpristi; 3 u-Elihorefi no-Ahiya, amadodana kaShisha, onobhala;+ uJehoshafati+ indodana ka-Ahiludi, umgcini-mibhalo; 4 uBhenaya+ indodana kaJehoyada wayephezu kwempi,+ uZadoki no-Abhiyathara+ bengabapristi; 5 u-Azariya indodana kaNathani+ wayephezu kwamaphini, uZabudi indodana kaNathani engumpristi, umngane+ wenkosi; 6 u-Ahishari wayephezu kwabendlu, u-Adoniramu+ indodana ka-Abhida, ephezu kwalabo ababebuthelwe ukwenza umsebenzi ophoqelelwe.+ 7 USolomoni wayenamaphini ayishumi nambili phezu kuka-Israyeli wonke, futhi ayelungiselela inkosi nabendlu yayo ukudla. Ngalinye lalinesibopho sokuba lilungiselele ukudla inyanga eyodwa onyakeni.+ 8 Yilawa amagama awo: Indodana kaHure, esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi;+ 9 indodana kaDekeri, eMakazi naseShahalibhimi+ naseBheti-shemeshi+ nase-Eloni-bheti-hanani; 10 indodana kaHesedi, e-Arubhoti (iSoko kwakungelakhe nalo lonke izwe laseHeferi);+ 11 indodana ka-Abhinadaba, lonke ukhalo lwezintaba lwaseDori+ (uThafati, indodakazi kaSolomoni, waba umkakhe); 12 uBhana indodana ka-Ahiludi, eThahanaki+ naseMegido+ nalo lonke iBheti-sheyani,+ eliseceleni kweZaretani+ ngezansi kweJizreyeli,+ kusukela eBheti-sheyani ukuya e-Abela-mehola+ nasesifundeni saseJokimeyamu;+ 13 indodana kaGeberi, eRamoti-gileyadi+ (amadolobhana amatende kaJayire+ indodana kaManase, aseGileyadi+ kwakungawayo; isifunda sase-Arigobhi,+ esiseBhashani+ kwakungesayo: imizi emikhulu engamashumi ayisithupha enodonga nomgoqo wethusi); 14 u-Ahinadaba indodana ka-Ido, eMahanayimi;+ 15 u-Ahimahazi, kwaNafetali+ (naye wathatha uBhasemati indodakazi kaSolomoni, waba umkakhe);+ 16 uBhana indodana kaHushayi, kwa-Asheri+ nase-Bheyaloti; 17 uJehoshafati indodana kaPharuwa, kwa-Isakare;+ 18 uShimeyi+ indodana ka-Ela, kwaBhenjamini;+ 19 uGeberi indodana ka-Uri, ezweni lakwaGileyadi,+ izwe likaSihoni+ inkosi yama-Amori,+ nelika-Ogi+ inkosi yaseBhashani,+ futhi kwakunephini elilodwa elaliphezu kwawo wonke amanye amaphini ayesezweni. 20 UJuda no-Israyeli babebaningi, bengangezihlabathi ezingasolwandle ngobuningi,+ bedla bephuza bejabula.+ 21 USolomoni yena, waba umbusi phezu kwayo yonke imibuso kusukela eMfuleni+ kuze kube sezweni lamaFilisti nasemngceleni waseGibhithe. Babeletha izipho futhi bekhonza uSolomoni zonke izinsuku zokuphila kwakhe.+ 22 Ukudla kukaSolomoni kosuku ngalunye njalo kwakungamakhora+ angamashumi amathathu kafulawa ocolekile namakhora angamashumi ayisithupha kafulawa, 23 izinkomo eziyishumi ezikhuluphele nezinkomo ezingamashumi amabili eziklaba emadlelweni nezimvu eziyikhulu, ngaphandle kwezindluzele+ nezinsephe+ namanxala nofukwe abakhuluphalisiwe. 24 Ngoba wayebusa konke okunganeno koMfula,+ kusukela eThifisa kuya eGaza,+ yebo wonke amakhosi anganeno koMfula;+ futhi waba nokuthula+ kuzo zonke izifunda zakhe, nxazonke. 25 UJuda+ no-Israyeli bahlala ngokulondeka,+ wonke umuntu ngaphansi komvini wakhe nangaphansi komkhiwane wakhe,+ kusukela kwaDani kuya eBheri-sheba,+ zonke izinsuku zikaSolomoni. 26 USolomoni waba nezindlwana zezitebela zamahhashi+ eziyizinkulungwane ezingamashumi amane zezinqola zakhe+ nezinkweli zamahhashi eziyizinkulungwane eziyishumi nambili. 27 La maphini+ ayenika iNkosi uSolomoni ukudla nawo wonke umuntu owayesondela etafuleni leNkosi uSolomoni, ngalinye ngenyanga yalo. Akukho lutho olwaluntuleka. 28 Futhi aqhubeka eletha ibhali notshani bamahhashi nobezipani zamahhashi+ kunoma iyiphi indawo okwakungaba kuyo, ngalinye ngokokuthunywa kwalo.+ 29 UNkulunkulu waqhubeka enika uSolomoni ukuhlakanipha+ nokuqonda+ ngesilinganiso esikhulu kakhulu nobubanzi benhliziyo,+ ngangesihlabathi esisogwini lolwandle.+ 30 Ukuhlakanipha kukaSolomoni kwakukukhulu+ kunokuhlakanipha kwabo bonke abaseMpumalanga+ nakho konke ukuhlakanipha kwaseGibhithe.+ 31 Futhi wayehlakaniphe kunabo bonke abanye abantu, kuno-Ethani+ umEzra noHemani+ noKalikoli+ noDarda amadodana kaMaholi; udumo lwakhe lwaba kuzo zonke izizwe nxazonke.+ 32 Futhi wayengakhuluma izaga+ eziyizinkulungwane ezintathu, izingoma zakhe+ zaba inkulungwane nesihlanu. 33 Wayekhuluma ngemithi, kusukela kumsedari oseLebhanoni+ kuya kuyihisopi+ elimila odongeni; futhi wayekhuluma ngezilwane+ nangezidalwa ezindizayo+ nangezinto ezihambayo+ nangezinhlanzi.+ 34 Babelokhu befika bevela kuzo zonke izizwe bezozwa ukuhlakanipha kukaSolomoni,+ yebo bevela kuwo wonke amakhosi omhlaba ayezwile ngokuhlakanipha kwakhe.+